« Antahkarana » : miisa 21 ireo mianatra mively amponga | NewsMada
« Antahkarana » : miisa 21 ireo mianatra mively amponga
Manakoako ny feon’amponga, eny Ambanidia eny amin’ny foibe fampianarana zavakanto, tantanin’i Volahasiniaina. Nanomboka ny talata lasa teo ny « Antahkarana », tetikasa iray hizarany ny traikefany. Miisa 21 ireo mianatra mively karazan’amponga samihafa ao amin’i Volahasiniaina sy i Odon Leiki Rakoto, mandritra ny andiany fahadimy amin’ity tetikasa miavaka ity. 11 taona ny zandriny indrindra ary 40 taona mahery ny zokiny indrindra.
Noferana ho tsy hihoatra ny 20, eo hoe eo, ny isan’ny mpiofana mba samy ho voaray an-tanana tsirairay izy ireo. Tanjona ny hampitombo ny fahaizana, aorian’ny fiofanana, araka ny fanazavan’i Volahasiniaina. Antony iray hafa koa anefa ny fahateren’ny toerana. Manoloana izany, ezahina ny hitady toerana lehibe kokoa, amin’ny andiany manaraka, araka ny fampanantenany hatrany.
Haharitra hefarana ny fiofanana. Anio ny andro farany. Hakotroka ny famaranana amim-pomba ofisialy ny “Antahkarana”, rahampitso tolakandro, etsy amin’ny Is’Art galerie,
Ampasanimalo. Haneho ny talentany ireo mpiofana. Maro ny tarika hanafana ny fotoana. Tsy iza izany fa i Volahasiniaina sy i Titane Ramasindrazana, i Odon sy i Andry BM (hampiaraka ny amponga sy ny bitbox), ny kaompania Leba, ny Zanaray Percussion ary ry Randramita.